China Lady kpochapụwo Cuff ajị atụrụ Slipper ụlọ ọrụ na suppliers | Yiruihe
Lady kpochapụwo Cuff ajị atụrụ Slipper
A ụzọ na-ekpo ọkụ & ala Sheepskin ịmịcha kwesịrị mere ezigbo Australian A larịị atụrụ; na akwa atụrụ ahụ ga-eme ka ụkwụ nwee mmetụta nke ọma; Jiri EVA mee ka ọpụpụ ga-eme ka mpempe akwụkwọ niile dị mfe ma dịkwa mfe ije.
Nke elu: Ehi Suede
The Level & lining & insole ka A Level Australian Sheepkin mere.
Nwanyị ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-acha uhie uhie nke nwanyị na-anọnyere anyị kemgbe mmalite ma bụrụ ezigbo ndị ahịa!
Ihe mkpuchi a bụ ụdị kpochapụwo slipcover nwere obere oghere dị n'ihu. Ndị slippers ahụ nwere ihe ịchọ mma dị na elu na akwa akwa gburugburu.
A na-eji akpụkpọ anụ atụrụ dara oké ọnụ, nwere akpụkpọ ụkwụ na-adịgide adịgide na-enweghị ntụpụ ma dị na agba agba n'oge niile n'afọ.
Mgbe ị lọtara n'ụlọ mgbe ị rụsịrị ọrụ ụbọchị siri ike ma jiri ụkwụ gị kechie akpụkpọ ụkwụ na-ekpo ọkụ dị ka ndị a, ị ga-enwe ahụ iru ala. Ihe mkpuchi a na-acha ajị anụ nwere ọmarịcha akpụkpọ anụ atụrụ na akwa ajị anụ dị nro.
Ọkpụkpụ ajị ajị anụ pụrụ iche na-eme ka slippers dị mfe iji eyi ma mee ka ụkwụ nwee mmetụta dị nro.
Otu ihe eji eme ya bụ EVA, nke na-eme ka ọ dị mfe mgbe ị na-eje ije. N'otu oge ahụ, ọ nwekwara uwe - na-eguzogide ọgwụ. Mgbe ị na-eje ije n'elu osisi gị siri ike, ha agaghị eme mkpọtụ ma teta onye ọ bụla.
Ihe mara mma nke akpukpo ahihia bu na o na-eku ume site na ndu ma na enyere aka mee ka ukwu gi ghara isi ure ma sie mmiri, ya mere i nwere ike iyi slippers n’afọ nile ma nwee obi iru ala.
Dị ejiji ịnyịnya ibu a kpochapụrụ agbaji, akwa mkpuchi zuru oke na nke dị omimi, na-eme ka obi dịkwuo ma ị na-eje ije n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí na ị gaghị enwe ibu arọ ọ bụla. Na ụdị akpụkpọ ụkwụ a, oyi agaghị atụ m n'oge oyi a.
Nke gara aga: Lady keagwaraogwa Agba Open Mkpịsị Shekwụ Atụrụ
Osote: Nwanyị Na-acha Anya Mkpịsị Shekwụ Atụrụ
Lady Sheepskin Short Boot na agba abụọ naanị
Men Atụrụ atụrụ Slipper na ìhè Rubber naanị
Baby Cuff Ime ụlọ ihicha
Nwanyị Atụrụ atụrụ slịpa na PVC naanị
Nwanyị Nwanyị Abụọ Shetkin Slipper
Mumụ nwanyị Inyinya Atụrụ atụrụ nke nwere akpụkpọ ụkwụ EVA